Isicelo se-Android sokumisa umculo bese silala idivayisi | Izindaba zamagajethi
Ungayilalisa kanjani idivayisi yethu ye-Android nge-Sleep Timer
Wake wazama ukulala idivayisi yakho ye-Android? Uma ungakwazanga ukukwenza, kungenxa yokuthi alukho uhlobo lwethuluzi lomdabu noma umsebenzi onekhono lokwenza lo msebenzi. Ngenhlanhla kunenqwaba yabathuthukisi bezicelo ezivela eceleni abenze iziphakamiso ezithakazelisa kakhulu, kufaka phakathi leyo ezosivumela ukuthi silale ifoni noma ithebhulethi yethu ye-Android.
Isicelo esizosisebenzisa njengamanje sinegama le-Sleep Timer, efanayo ne- iyahambisana nomakhalekhukhwini kanye namathebulethi, inqobo nje uma zinohlelo lokusebenza olususelwa ku-Android. Manje, ithuluzi ngokwalo lisebenza kahle ngokuphelele, noma kunamaqhinga athile esingawasebenzisa uma kukhulunywa ngawo shintsha "lala" somakhalekhukhwini wethu, ikakhulukazi uma singabanye balabo bantu abawushiya ukuze balalele umculo obanjwe kuwo.
1 Lala ucishe umculo kudivayisi yethu ye-Android
2 Ukusetha Isikhathi Sokulala kudivayisi yethu yeselula
Lala ucishe umculo kudivayisi yethu ye-Android
Ngenkathi ngaphambili siphakamisa ukuthi lolu hlelo lokusebenza olubizwa nge-Sleep Timer luzosinikeza ezinye izindlela ezithokozisayo lapho luphathwa kahle ngamaqhinga ambalwa, besizama ngokuphelele ukubhekisa kulo msebenzi esiwubeke kusihloko esidlule; Lokhu kusho ukuthi uma ngomzuzwana othile sishiya umakhalekhukhwini wethu udlala umculo ngohlobo oluthile lohlu, uhlelo lokusebenza lwe-Android uzoba nethuba lokuyenza iyekei-timer ifinyelela inani layo lokugcina. Uma uzibuza ukuthi kungani kufanele sikwenze lokhu, impendulo isuselwa ekongeni ibhethri okufanele uyigcine ukuze ingakhiphi ubusuku bonke ngenkathi ifoni idlala uhlobo oluthile lwengoma.
Isikhathi sokulala isicelo ongayisebenzisa ngokuphelele, yize kuzofanele ubekezelele izikhangiso ezihlukile ezethulwa kusixhumi esibonakalayo sayo; Uma ungafuni ukuthi zethulwe, kuzofanela uthole ilayisense elikhokhelwayo. Kuyafaneleka futhi ukukusho lokho ngasizathu simbe unjiniyela uvimbele ukusetshenziswa kwaleli thuluzi ezifundeni ezithile kweplanethi, ngakho-ke kufanele uzame landa i-apk nganoma iyiphi enye indlela.
Lapho usucabangele lokhu kucatshangelwa okujwayelekile futhi ngemuva kokufaka uhlelo lokusebenza, kufanele ufake ukumiswa kwalo.
Ukusetha Isikhathi Sokulala kudivayisi yethu yeselula
Ngokuzenzakalelayo, lolu hlelo lokusebenza lwe-Android izosisiza ngesikhathi esiphezulu semizuzu eyi-100, okuthile esingakushintsha uma sidinga ukulalela umculo isikhathi eside kunalokho okusungulwe kulokhu kulungiswa.
Lapho sesichaze isikhathi esiphezulu (okungaba amahora ama-2 noma ngaphezulu) ekucushweni kwesibali sikhathi sokulala, kuzofanele sithinte kuphela inkinobho ethi "Qala", ngawo ukubalwa phansi kuzoqala ngokushesha. Okuheha kakhulu kunakho konke ukuthi umsebenzisi walezi zingcingo angakwazi ukubeka izingoma ezithile azilalele ngenkathi zilele. Lapho isikhathi sokubala phansi siphela, i-Sleep Timer izoyeka ukudlala lezi zingoma okokuqala (emaminithini ambalwa ngaphambili) futhi ngokuhamba kwesikhathi, izolalisa ifoni noma ukuyicisha.
Ngaphezu kokwenza lezi zenzo, Isikhathi Sokulala sinethuba lokuthi khubaza imodyuli ye-Bluetooth nokuxhumeka kwe-Wi-Fi Kwedivayisi. Lokhu kungenye yezinzuzo ezinkulu esingasindisa kuzo ithuluzi, ngoba ngokungasebenzisi i-intanethi ngenxa yalokhu kungasebenzi, lezo zaziso zomsindo (noma ukudlidliza) ezivame ukubakhona lapho i-imeyili ifika, ngeke zivele, zishiya ukuphumula ngokuhlala ubusuku bonke.
Isikhathi sokulala sikhubaza kokubili i-Bluetooth ne-Wi-Fi ku gcina ibhethri eliningi ngangokunokwenzeka njengoba siphakamisile ekuqaleni. Ngaphandle kokungabaza, lolu hlelo lwe-Android luyindlela enhle kakhulu, ikakhulukazi kulabo abathanda ukuqala ukulala ngenkathi belalele umculo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayilalisa kanjani idivayisi yethu ye-Android nge-Sleep Timer
Ungawathola kanjani ama-movie wabalingisi bakho abayizintandokazi ezi-2
Ungayinikeza kanjani ngokuphepha idivayisi ye-Android kwabancane